विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट समातिएको ३३ किलो सुन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ! – Arthatantra.com
काठमाण्डौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गएको पुस २१ गते अवैद्य रुपमा मित्रिएको १५ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बरामद गरेपछि धेरै रहस्यहरु एक पछि अर्को गरी खुल्न थालेका छन ।
एयरपोर्ट भन्सारमा लामो समयदेखि रेडियो टेक्निसियन विन्दुकाजी महर्जन, तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यदव र प्रमुख भन्सार अधिकृत टंक पौडेलले नै सुन तस्करीमा सेटिङ गर्दे आएको खुलेको छ ।
प्रकाशित दृष्टि साप्ताहिक, २६ पुस २०७३, ३।४५
माओवादीले रातारात सत्ता परिवर्तन गर्न भारत किन गए भन्ने कुरा अब सबै नेपालीले थाहा पाउने छन् । संविधानसभाको चुनावताका पनि फोनमा 50 करोड मागेको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन,। माओवादीहरूको कारण सबै नेपालीको बदनाम भएकोले समय मै हटाउनु पर्छ ।
खानेपानीको लागि ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाा बिनियोजन काठमाण्डौं । खानेपानी आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत रुपमा खानेपानी र सरसफाइको […]
तयार बस्नुहोस्, फाइनान्सले दिँदैछ शतप्रतिशत हकप्रद, बिक्री प्रवन्धक तोकियो काठमाण्डौं। जेबिल्स फाइनान्सले पूँजीको एक सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ। […]
अनुहार र नागरिकता हेर्दा नेपाली जस्तै लाग्ने दलालबाट मुलुकमाथि आक्रमण : रिमाल हरिशरण न्यौपाने ,काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं […]
मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठ मिस वल्डको फास्ट ट्रयाकमा, के आउलिन् त टप २० मा ? काठमाण्डौँ । नेपाल सुन्दरी अस्मी श्रेष्ठले अमेरिकाको समय अनुसार आइतबार राति हुने मिस […]
दुईवटा सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ ! महोत्तरी । महोत्तरी प्रहरीले जिल्लाको दुई स्थानबाट कालोबजारी गरेको आरोपमा दुईवटा सहकारी […]
निजी गाडी चलाउनेबाटै रु ८ लाख संकलन ! काठमाडौँ । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने […]